Hay’addii Sahminta,Cabbirka iyo Diiwaangelinta Dhulka Soomaaliya oo dib loo howl-galinayo – Radio Daljir
Abriil 27, 2015 1:01 b 0
Garowe, April, 27, 2015 – Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta Inj. Saalax Sheekh Cismaan iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar shaqo oo 4 cisho ku joogay dalka Turkiga ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdiso.
Inj. Saalax ayaa waxa uu sheegay in uu saxiixay baaq caalami ah oo markii ugu horreysay Soomaaliya ay qeyb uga noqoneyso nidaamka caalamiga ah ee sahminta, cabbirka iyo diiwaangelinta dhulka.
Waxa uu intaa ku daray in Soomaaliya ay gudbisay xaaladda dhulka Soomaaliya sida uu hadda yahay burburkii kadib isaga oo xusay in uu dalku lahaan jirtay shuruuc iyo xeerar ku saabsan cabbirka iyo mikiyadda iyo diiwaangelinta dhulka.
Kalfadhigii 6-aad ee Barlamanka Federaalka ah oo lagu wado in uu ka Furmo Muqdisho